फिलिपिन्स जाने फुटबल टोलीलाई एन्फाद्वारा बिदाई, को को छन् टीममा ? – Khel Dainik
फिलिपिन्स जाने फुटबल टोलीलाई एन्फाद्वारा बिदाई, को को छन् टीममा ?
खेलदैनिक, ११ चैत / एएफसी एसियन कप छनोट खेल्न फिलिपिन्सको मनिला जान लागेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टीमलाई एन्फाले शुक्रबार अपरान्ह बिदाई गरेको छ ।
खेलकुद मन्त्री दलजीत श्रीपाईलीका साथै एन्फा पदाधिकारीले बधाईका साथै टोलीलाई जितको लागि शुभकामना व्यक्त ग¥यो । टोली शनिबार बेलुकी मनिला प्रस्थान गर्नेछ । नेपाल रहेको समूह एफमा फिलिपिन्सका साथै ताजिकिस्तान र यमन छन् ।
फिलिपिन्ससँग चैत १५ गते ‘अवे’ खेलको लागि टोली जान लागेको हो । फिलिपिन्स फिफा वरियतामा नेपालभन्दा ४६ औं स्थान माथि रहेको टोली हो । नेपालले पछिल्लो समय दोहामा भएको मैत्रीपूर्ण खेलमा फिलिपिन्ससँग ३–० को हार बेहोरेको थियो । यस्तै, नेपालले फिलिपिन्ससँग त्यसअघिको दुई मैत्रीपूर्ण खेलमा पराजित भएको छ । नेपालले सन् २०११ मा भएको मैत्रीपूर्ण ४–० र २०१४ मा भएको मैत्रीपूर्णमा पनि ३–० ले नतिजा गुमाएको थियो ।
होम एण्ड अवेका आधारमा चल्ने छनोटअन्तर्गत नेपालले आगामी १४ नोभेम्बरमा घरेलु मैदानमा फिलिपिन्ससँग खेल्ने छन् । त्यसअघि नेपालले दोस्रो खेलमा आगामी जुन १३ मा यमनसँग घरेलु भूमिमा खेल्नेछ । त्यस्तै नेपालले ५ सेप्टेम्बरमा ताजिकिस्तानसँग पनि घरेलु मैदानमा खेल्दा १० अक्टोबरमा नेपालले ताजिकिस्तानसँग उसैको मैदानमा खेल्नेछ । यस्तै नेपालले २७ मार्च, २०१८ मा छनोटको अन्तिम खेलमा यमनसँग उसैको मैदानमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछ । समूह चरणको खेलपछि प्रत्येक समूहको शीर्ष दुईमा पर्ने टोलीले दुई वर्षपछि हुने एसियन कपमा सहभागिता जनाउनेछन् ।
← नेपाली फुटबल टोली फिलिपिन्स जाँदै, यस्तो छ तयारी (फोटो फिचर) राजर्षि जनक कप: ब्वाईज युनियनलाई हराउन मनाङलाई सडेन डेथको सहारा →
पाराल्याम्पिकका लागि केल्मीको प्रायोजन चैत्र ११, २०७३
ट्राई सिरिजका लागि १९ खेलाडी (नामावली सहित) चैत्र ११, २०७३
फुटबल खेलाडी र अफिसियललाई खेलस्थल मै कोभिड विरुद्धको खोप ! चैत्र ११, २०७३
नेपाली क्रिकेटलाई अझै उचाईंमा पुर्याउने सपनासहित पारसको सन्यास चैत्र ११, २०७३
अल्मुतारीले माफी माग्दै भने “नेपाली फुटबललाई मेरो विशेष सम्मान” चैत्र ११, २०७३
एन्फा प्रवक्ता राईले दिए राजिनामा चैत्र ११, २०७३